Ameerikaan Filannoon Itoophiyaa tibbana gaggeeffame "bilisa fi haqa qabeessa miti," jette
11 months ago 1460 Qoodi
Filannoon Biyyaaleessaa Itoophiyaa Waxabajjii 14 darbe gaggeeffame haala tasgabbiin hin jirreetti kan gaggeeffame fi filannoo ummata Itoophiyaa hundaaf bilisa fi haqa qabeessa akka hin turre waajjirri Dhimma Alaa Ameerikaa ibsa har'a galgala baaseen beeksiseera.
Paartilee morkattoota bebbeekamoo filannicha keessa hirmaachu dhabu isaanii, hogganoota siyaasaa dhageettii guddaa qaban hidhaatti jiraachu isaanii fi walitti bu'iinsa kutaalee biyyattii gara garaatti itti fufee jiru ; tokkummaa fi sirna heera biyyattii eegsisuuf marii hunda hirmaachisaa ta'e dirqama akka ta'e kan mul'isudha jedhe waajjirichi.
"Walitti bu'iinsa fi beela naannoo Tigraay keessa itti fufe jiru tarkaanfii atattamaa kan gaafatuudha" kan jedhe ibsi kun, waliigaltee dhukaasa dhaabuu akka godhamu, waraanni Eertiraa Itoophiyaa keessaa akka ba'u, yakkoota raawwataman akka qorataman fi gargaarsa namoomaaf karaan akka saaqamu gaafateera.
Ameerikaa Filannoo2013 Lola Tigraay Siyaasa Itoophiyaa
May 28, 2021, 5:48 p.m.
'Michuuwwan gocha garee nuti shororkeessaa jenne salphaatti ilaalan dhiibbaa nurratti gochaa jiru'
June 24, 2021, 9:26 a.m.
EU fi US haleellaa xiyyaaraa Tigraayitti namoota nagaarratti raawwate jedhame balaaleeffatan
May 28, 2021, 10:34 a.m.
Ameerikaan Itoophiyaarratti qoqqobbii dabalataa akka keessuu akeekkachiifte